Elton John in ay guursadaan lamaanahaaga qotoda dheer - Rule News
Elton John in ay guursadaan lamaanahaaga qotoda dheer
Pop icon Elton John ayaa sheegay inuu ku xerin doona gunti ku lammaane David Furnish hadda in uu u dhashay Britain ayaa sharciyeeyay guurka gay.
Farshaxankii top-iibinta u sheegay NBC ee “Maanta” ayaa muujinaya in “aad aamusnaan annaguna waannu samayn doonnaa.”
“Laakiin waxaan u samayn doonaa, oo waxay noqon doonaan munaasabadda farxadda,” John daray.
Lamaanahan ayaa, kuwa wada leeyihiin laba caruur ah, galay a lammaan madani in 2005.
Xeer taariikhi sharciyeeysay guurka dadka isku jinsiga qaatay saamayn in England iyo Wales on Saturday, heerka ugu dambeeya ee la dagaalanka dheer sinnaanta sharci ee naageysta iyo khaniisiinta.
iskaashiga Civil ayaa sharci waxaa tan 2005.
“Waxaan aad ugu han Britain iyo sharciyada ah in aan la arki u soo galeen jiritaanka tan iyo markii aan wada ahaa ahay,” John ayaa sheegay in hadalladii waraysiga qarka u saaran inay hawada Monday.
“Waayo, sharciga si ay u dhex iman waa farxadeed, oo waa in aynu u dabaal. Waa in aynaan kaliya odhan, 'Oh, sidoo kale waxaan leenahay iskaashi sokeeye. Waxaan ma doonayo in ay dhibaato si aad u guursato.’ Waxaan heli doonaa guursaday.”
Furnish u sheegay Las Vegas Review-Journal wareysi gaar ah in xafladda oo saaxiib qaadan lahaa meel May.
“Waxaan qabaa waxa aannu ku samayn doonaa waa u tag xafiiska diiwaanka ah ee England ee May, oo waxay qaadan doonaan wiilasha nala, iyo laba qof oo markhaatiyaal,” daabacaadda isaga sida laga soo xigtay.
article Tani, Elton John in ay guursadaan lamaanahaaga qotoda dheer, waxaa syndicated ka AFP oo waxaa halkan fasax posted. Copyright 2014 AFP. All Rights Reserved
20759	0 Elton John, Guurka
← 3000 Year Old lafaha helay buuxeen Cancer Google ayaa sheegay in Turkey qabateeyo domain Web ay →